Nkọwa ahia - Mụta 2 Trade
Fraịde, Machị 5, 2021
EURJPY Bullish Na-akwado Nkwado Na-akwụ Ahịa N'ihu 130.00 Ọkwa
EURJPY Nyocha Ahịa - Machị 5 Thega n'ihu nke mmetụta ire ere na yen yen Japan na-agbakwunye ụkwụ na EURJPY n'ogogo 129.00 na ngwụsị izu. Ka ọ dị ugbu a, ụzọ abụọ ahụ na-akwado ọnụ ọgụgụ echiche ya dị elu na ọnụ ọgụgụ gbara gburugburu na 130.00. Ka equities na US zaa-anọgide na-egosi na ike n'otu […]
Mkpụrụ ego Binance (BNBUSD) Ọnụahịa Na-eche Ihu Nkwado na $ 142
BNBUSD Nyocha Ahịa - Machị 05 A na-atụ anya mbelata ọnụahịa na ọkwa nkwado na $ 196 nwere ike ịnwale. Ndakpọ nke ọkwa a kpọtụrụ aha ga-ekpughe mkpụrụ ego ahụ na ọkwa $ 142 na $ 117. Ọ bụrụ na ọnụ na price etisasị site oké ehi, na price nwere ike […]
Uniswap (UNIUSD) Ọnụahịa na-agbapụta ọkwa nkwụsị nke $ 28
Nnyocha Ahịa Uniswapr - March 04 Ọ bụrụ na ehi nwere ike ịkwanye ọnụahịa karịa $ 28 ọkwa ọnụahịa, na kandụl kwa ụbọchị na-emechi ọkwa nkwụsi ike, mgbe ahụ, ọkwa nkwụsi ike na $ 32 na $ 40 nwere ike iru. Enweghị ike imebi ndị na-eguzogide larịị na $ 28, na -agba nwere ike laa azu na […]
AUDUSD anabatara na ọkwa 0.7815 zere ịgbaso, Aussie nke GDP kwadoro
AUDUSD Ahịa Ahịa - March 4 Di na nwunye AUDUSD hụrụ ụfọdụ ịzụrụ na Tọzdee ma yie ka ha ga-agbanye gburugburu ọkwa 0.7815 nke ahia ụbọchị ọ bụla. Ndị na-azụ AUDUSD na-ejide ala dị elu karịa 0.7800, na-agbatị uru mgbake na mbido European trading. Aussies na-eduga na nkwado site na mma karịa ka a tụrụ anya […]
Wenezdee, Machị 3, 2021
S&P 500 Na-eduzi Ugwu Gburugburu 3900 Ka eliegwọ Enyemaka Na-akpata USD Bears
Nyocha ọnụahịa S & P 500 - Machị 3 S & P 500 gbara gburugburu 3,897, gbagoo 0.68% n'oge nnọkọ European na Wednesde. Mgbe ọ dajesịrị na nnọkọ gara aga, ndeksi ahụ na-ebute ihu site na 3,868 gbadara gafere 3,900. Ntubata nke liquidity na-azọrọ na-abịa mgbe Congress gafere na-abịa enyemaka ụgwọ nwere ike […]
Ọnụ Ahịa Star na-echere nkwụsịtụ
STELLAR Ahịa Ahịa - March 03 Ntugharị nke ọnụahịa na akara ala nke triangle ga-eme ka ọnụahịa ahụ gaa na $ 0.33 na $ 0.22 ọkwa ọkwa. Ọ bụrụ na nkwụsịtụ ahụ ewere ọnọdụ na akara elu nke triangle ahụ, ọnụahịa ahụ ga-ezubere ọkwa nkwụsi ike na $ 0.50 na […]
Ihe Mgbakwunye USDCHF Na-aga n'ihu Na-agafere Mid 0.9100 Amid Shift in Outlook Dollar
USDCHF Ahịa Ahịa - March 2 USDzọ USDCHF gbakwunyere ụbọchị ọma nke traction n'oge mmalite European nnọkọ na Tuesday na-agbasa elu karịa etiti 0.9100 akara. Ọganihu a na-abịa ka ike dollar na-aga n'ihu maka ụbọchị nke abụọ n'ahịrị na mgbanwe ọhụụ na ahịa ahịa. US […]
ADA / USD Ọnụahịa nwere ike ịlaghachi na Ọkwa Nguzogide $ 1.46
ADA Ahịa Ahịa - Machị 02 Kwesịrị ka anụ ọhịa bea na-abawanye oge ha ma bulie ọnụahịa ahụ na ọkwa nkwado nke $ 1.11, mgbe ahụ, enwere ike ịnwale ọkwa $ 0.98. Ọ bụrụ na a jụrụ ọnụahịa ahụ na ọkwa $ 1.23, ọnụahịa ahụ nwere ike ịga n'ihu na-agagharị. Enwere ike ịchọta nguzogide nguzogide na $ 1.46, $ 1.68, na […]
EURUSD na-ere ere traction N'okpuru 1.2050 na data US echere
EURUSD Ọnụahịa Ahịa - Machị 1 Ejiri EURUSD gbagoro nso 1.2101 n'isi ụtụtụ Mọnde n'oge nnọkọ European wee bido mbelata ọhụrụ. Pairzọ ego ahụ na-ele anya na ndịda chere ihu na ọ ga-ekwe omume ire ahịa traction gaa na ọkwa 1.2020 n'oge nnọkọ ahụ. Anya tụrụ anya na ntọhapụ nke US- ISM nwere ike ịbụ na ọ ga-egosi siri ike uto na […]
Bitcoin SV Ahịa Forms Mmaji Atọ Chart Nlereanya; ike Bullish Reversal Level
Bitcoin SV Ahịa Ahịa - Machị 01 Mkpụrụ ego ahụ nwere ike ịda site na ọkwa nkwado nke $ 171 ma ọ bụrụhaala na ọkwa ahụ ekwuru na ọnụahịa ahụ nwere ike ịbawanye na ọkwa nkwụsi ike nke $ 185, $ 198, na $ 217. Ọ bụrụ na, na -agba nwee ike banye n'ime $ 171 downside, na-akwado larịị nke $ 152 na $ 134 […]
Mụọ 2 Trade Forex News & Strategies
Ihe niile ị chọrọ na FX News Service
Ọ bụrụ n'inwe ahụmịhe niile na ahịa azụmaahịa, mgbe ahụ ịmara na enwere ọtụtụ ọrụ ozi ọhụụ dị na ntanetị. Ọtụtụ na-enye mmelite ekele na isi okwu na-akpali akpali, ebe ndị ọzọ na-adabere na ndenye aha. Dabere na mkpa gị n'otu n'otu, ọtụtụ n'ime nhọrọ ndị a nwere ike ịbụ ndị ọzọ ga - agbanwe agbanwe .Ọ bụ eziokwu, ọ bụghị ọrụ niile ka ha nha. Mụta nri ahia Mụta 2 bụ ebe pụrụ iche maka ihe niile na-eche ego, CFDs, ọdịnihu, na cryptocurrencies. Ma ị na-ere mmanụ manu ma ọ bụ Euro, a ga-edozi ihe ndị dị mkpa ụbọchị ahụ nke ọma, n'oge ejiji. Nke kachasị, ọrụ ozi FX a bụ n'efu 100%. Ike ịgụ n'etiti ahịrị bụ akụkụ buru ibu nke ịbụ onye ahịa na-aga nke ọma. Na-enweghị ọnọdụ ziri ezi, mmetụta ahịa ọ ga-enwe na akụkọ na-agbasa akụkọ ma ọ bụ mmemme akụ na ụba nwere ike iyi ihe omimi. Ghọta ihe omume ahụ, nke ahịa ga-emetụta, na otu esi enweta uru site na omume ahụ bụ nkà ndị sitere na ọtụtụ afọ nke ahụmịhe. Nke ahụ bụ ebe ndị otu Mmụta 2 Trade batara - ha nwere etu esi amata akụkọ akụkọ bụ ndị na-ebugharị ahịa, yana ọ bụ naanị mkpọtụ.
Ihe niile Forex News, 24 Awa A Day, 5bọchị XNUMX Otu Izu
Mbili nke ahịa dijitalụ emeela ka azụmaahịa na-arụ ọrụ dị nso na elekere 24 kwa ụbọchị, ụbọchị ise n'izu. Dị ka okwu ochie si kwuo, "ego anaghị ehi ụra." N'ihe banyere ịzụ ahịa nke oge a, okwu siri ike ịchọta. N'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ị bụ onye ahia na Asia, Middle East, Europe, ma ọ bụ United States, egwuregwu ahụ na-aga n'ihu ma nwee ohere. Mmetụta akụkọ akụkọ dị ịrịba ama nwere ike inwe na ahịa dị ukwuu. O bu ihe nwute, ihe omuma banyere ahia abughi na oge awa anyi. Ọ gaghị adị mma ịmara ihe ga - eme mgbe ị na - anọghị na ntanetị azụmaahịa yana otu esi emetụta ọnọdụ oghere gị? Lebe anya karịa nri nkuzi Mụta 5 Trade. Na ndị nyocha na-ekpuchi oge azụmaahịa Asia-Pacific, European, na US, ị gaghị enwe ohere mgbe ị na-abịakwute akụkọ FX. Site na New York ruo London ruo Tokyo, ndị nyocha anyị nọ na elekere, na-akụda ahịa na ezigbo oge. Ọ bụrụ na elekere oti mkpu gị apụtaghị na ị bịarutere n'ahịa ahụ, enweghị nchekasị - nyochaghachi ngwa ngwa nke Mụta 2 Trade's news ga-eme ka ị laghachi n'ọsọ asọmpi n'oge na-adịghị anya.
Emelitere ikpeazụ: January 16th, 2020